Earth Hole Digger, Hole Machine Pasi, Log Splitter - Dongheng Machinery
KINGER pasi auger drive yakagadziridzwa pakutanga kweYantai Dongheng Machinery Co, Ltd. Parizvino, isu tine yakawanda yekugadzira uye yekutengesa ruzivo mune ino ndima.With yakatsiga mhando yepamusoro uye yakafara mitsara yemhando, isu tinoita KINGER brand inozivikanwa mukurumbira pamusika.Verenga Zvakawanda
KINGER cone danda rinotsemura masango inochinjika kuti iiswe pane chekuchera, skid steer, backhoe loader nezvimwewo yakachengeteka kupfuura ruoko log log splitter seyakajairwa.Surface kuomesa kurapa kwakakosha neyakagadziriswa koni zvinoreva kuti icharatidza kuomarara uye kupinza kuita uye kugona kwakanyanya panguva kutema huni.Verenga Zvakawanda
KINGER akaona musoro uchishandisa yakakosha mbishi zvinhu uye mapuraneti magiya, ayo ane kuita kwakanyanya uye hwakareba hupenyu hupenyu.Iyo inogona zvakare kubudirira kuwedzera masango kushanda kushanda.Verenga Zvakawanda
Nyanzvi yekubatanidza inogadzira uye mutengesi wekuvaka, zvekurima uye zvemasango michina, iyo yakazvipira kugadzikana mhando yevatengi.
Tiri Pasi rose
Tiine makore gumi nemaviri ekugadzira uye yekutengesa ruzivo, isu takagadzira yedu yega brand KINGER. Sevatungamiriri vanogadzira michina yekuchera yekuchera, isu takazvipira kuve pamberi pehunyanzvi uye hunyanzvi.Nenzira idzi, KINGER chigadzirwa chakaendeswa kune dzimwe nyika dzakawanda, dzakaita seGerman, Denmark, Russia, USA, UK, Canada, Netherlands , New Zealand, Indonesia, iyo inozivikanwa nevatengi pasi rese.
Mugadziri uye mutengesi wemishini yekuvaka nemidziyo yemasango
Yedu yakakosha kukosha
Hunhu itsika yedu
Yemaawa makumi maviri neshanu Service
Yantai Dongheng Machinery Co., Ltd. hwakagadzwa muna 2010 uye vakava vaitungamirira nzvimbo iri Excavator pakapfava michini muchimbichimbi akurumidze. Kambani yedu yapfuura ISO9001: 2015 uye CE kuvimbiswa. Isu tiri nyika yepamusoro-tech bhizinesi nehunyanzvi, hunhu uye hunyanzvi Kambani yedu ine kodzero dzakazvimirira dzepfuma. Parizvino, isu takawana anopfuura makumi matatu patent. Izvo zvinoita kuti Dongheng ave chinzvimbo chinotungamira muChina yekuvaka michini indasitiri.
Yantai Dongheng Machinery Co., Ltd. yakazvipira kuR & D, kugadzira uye kutengesa excavator yekubatanidza yekuvaka, kurima uye masango michina. KINGER bhizinesi hombe rine Mini excavator, Earth auger, Log splitter, Log grapple, Saw musoro, Mixer bhaketi, Mixer mbiya, Hedge trimmer, Chain trencher, Tree shear, Stump planer, Hydraulic sando, Quick coupler, Kutsvaira bhurasho uye mimwe michina yekuvaka uye kusungira.
Mukuita kwekutevera kugadzirwa, isu tine vanoverengeka vevashandi vekutengesa vanozoedza zvese-kuyedza uye voita chero mhando, dhirivhari, mutengo kana zvinodikanwa zvichienderana nezvinodiwa zvako kuzadzisa zvaunotarisira kusvika pazvinogoneka. , isu tinovimbisa mhando yezvigadzirwa zvedu, kutevedzera maitiro ebhizinesi uye chengeta zvakavanzika zvekutengesa.
Chigadzirwa chedu chinotora tekinoroji yepamusoro uye nyowani, inoshandiswa nezvinhu zvakanakisa uye inotsigirwa neakasiyana epamberi yekuongorora uye yekuyedza michina kuti uve nechokwadi chehutano hwakagadzikana uye kuita kwakanyanya kunaka. Uye zvakare, isu takavimbiswa mutengesi wegoridhe paAlibaba.Tinogona kununura nhumbi 100% nenguva yekuvimbiswa.
Isu tinopa 24-awa yakakwana yehunyanzvi rutsigiro uye online sevhisi Nekuda kwekuti isu tine yedu yedu R&D boka, kana iwe uchida rumwe rubatsiro mune technical technical, isu tinogona kukupa iwe anobatsira ruoko. Kana iwe uine chero mibvunzo mushure mekutenga chero edu zvigadzirwa, ndapota usazeze kutisiira isu meseji. Isu tinobata iwe nekukurumidza sezvazvinogona mushure mekutarisa.